INdlovukazi uZingha yase-Angola, emelana nokubuswa ngamakholoni ePortugal - Afrikhepri Fondation
Indlovukazi uZingha evela e-Angola
INdlovukazi uZingha wase-Angola, emelana nekoloni lamaPutukezi
Lindlovukazi uZingha (Jingha) wase-Angola ubalule umlando wokukhululwa kwabesifazane base-Afrika ngaphambi kwesikhathi sabo, ngaphambi kokufika kwamakoloni amaPutukezi e-Afrika emnyama. U-Anna Zingha wayeyindlovukazi yokugcina yase-Angola yangaphambi kwekoloniyali. Esebuse cishe iminyaka engamashumi amathathu ngekhulu le-17, waze wafa eneminyaka engama-82, u-Anna Zingha wamelana ngokuqinile nezifiso zePortugal zombuso wakhe.
Lapho amaPutukezi efika ngo-1484 endaweni yase-Angola ephethwe yiNdlovukazi u-Anna Zingha, abahlali bamangala lapho bethola i-El Dorado yezifundazwe eziyi-8, enomhlaba ocebile ovundile kanye nokuzalanisa izinkomo ezichumayo. Ngenkathi u-Diego Cao, itilosi lasePutukezi lifika ngasemlanjeni woMfula iCongo ngo-1482, wasola ukuthi uzohlangana nabanye abantu. Eminyakeni emibili kamuva, efika embusweni, wamangala ngobuhle bezwe, umqondo wenhlangano yezenhlalo yalaba bantu, kulo nyaka ka-1484, ukuthola abamnyama begqoke ngokungenasici, behlobe abesifazane, impilo enhle yezingane, inesizotha kakhulu, abantu abanenhlonipho, yize bengakaze baxhumane ne- "Impucuko yaseYurophu".
IziPutukezi zathola lapho abantu abakhuthele abaqhuba imisebenzi ehlukahlukene. Enye yezincwadi ezingavamile ezigcinwe ngaleso sikhathi zichaza insimu yase-Angola kanje: “Indawo yanikeza isihambi umbukwane omuhle kakhulu futhi othakathayo. Izivini ezinkulu, amasimu ambozwe isivuno esiphindwe kabili minyaka yonke, amadlelo acebile. Imvelo ibukeka ikujabulela ukuhlanganisa lapha zonke izinzuzo izandla ezinomusa ezizinikeza kuphela ngokuhlukile kwamanye amazwe futhi, yize zimnyama, izakhamizi zombuso wase-Angola ngokuvamile zinamakhono futhi zinobuhlakani obukhulu " .
Ama-royal royal ama-Amazon
Izwe ligcinwe kahle, baqonda ngokushesha ukuthi umbuso, ophethe ukuphathwa okujulile, amakhodi enhlalakahle, umhlaba ocebile, ezolimo zokuzilibazisa ngokwanele. Konke kwakuzolile, kuphumelele. Kwakunezindlu ezihle kakhulu ezakhelwe, izakhiwo ezingenaso isithunzi ngalabo baseYurophu. Ukuhweba phakathi komakhelwane kwakubushelelezi. Konke okwenziwa nge-barter. Umbuso I-Kongo kuthengiswa ngombuso we Matamba, leli zwe ababizwa ngalo "A-write", okusho ukuthi: izwe leNkosi Ngola. Igama lomphathi ohlonishwa kakhulu. Kwakukhona inkantolo enezinhlaka, izikhulu namakhosazana, ibutho eliholwa yinqaba owesifazane, indodakazi yenkosi, eyayibizwa ngeNdlovukazi uZingha. Mncane futhi umuhle ngokumangalisayo. Emabuthweni akhe, kuleli butho abesifazane badlala indima enkulu. Babenjalo Amazons, bekwazi ukuphatha izikhali kanye namahhashi agibele, futhi baphulwa empini nezitha ezingenzeka.
Indlovukazi umcibisholo ohlala njalo uthola umgomo
Ngaphandle kokulibala, banquma ukuyithatha ngokusemthethweni i-Angola egameni leNkosi yasePortugal, ukuze bayenze indawo yokulethwa kwezigqila zensimu yabo yaseBrazil futhi babe abaphathi kalula bomcebo wezwe. UMbande Zingha wayengudadewabo nomeluleki weNkosi yaseNgola (manje eyi-Angola), futhi wayengummeleli wakhe ngesikhathi sokuxoxisana namaPutukezi. Igama lakhe langempela nguNgola Mbandi Nzinga Bandi Kia Ngola, "Indlovukazi omcibisholo wayo uthola umgomo", wayeyingcweti ekhaliphile enekhwalithi yensimbi nethonya elingenakuphikwa. Waqalwa esemncane nguyise amlandela njengesithunzi, wayefunde ukusabela "njengendoda" yamazwe. Lowo owazethula kwabaMhlophe, (u-Diego Cao kanye nethimba lakhe), kwakuyile nsizwa eyiqhawe, indodakazi yenkosi, egama linguNdlovukazi uZingha. Unekhono lokusebenzisa umcibisholo onobuthi, inganekwane ithi ayikaze ilahlekelwe uphawu lwayo. I-Angola yayiziqhenya ngendlovukazi yayo uZingha amaPutukezi ayiqamba kabusha U-Anna Zingha. Kuze kube sekushoneni kwakhe, wahlala enesizotha, engalokothi akhaphele imbangela yabantu bakubo ababemelwe inhlonipho ejulile. Njengawo wonke amantombazane angaleso sikhathi, wayekwazi ukuma phambi kwabantu besilisa. Maye, uzokhashelwa ngabantu bakhe futhi izwe lase-Angola lizobhekana nobugqila, izimpi kanye namakoloni.
Ukuphikisana okunamandla kwamakoloni asePutukezi
Waba yindlovukazi ngesikhathi kushona umfowabo ngo-1624. Wabeka abesifazane, kubalwa nodadewabo ababili uKifunji noMukumbu, kuzo zonke izikhundla zikahulumeni. Ngenkathi amaPutukezi ephula isivumelwano sokuthula, wahola ibutho labesifazane ikakhulukazi elalimelana nabo, elenza umonakalo omkhulu kubo, ngenkathi enqoba imibuso eseduzane ngomzamo wokwakha umfelandawonye onamandla anele okuxosha amaPutukezi ezweni. Afrika. Wemukela ukuqedwa komlilo, wabe esamukela isivumelwano sokuthula ngo-1635. Emukelwa ngumbusi wasePortugal uDon Joao Correia da Souza, u-Anna Zingha wamaka izifiki ngomuzwa wakhe wokuphindela futhi nekhono lakhe lezepolitiki elalibusa ukuhlangana. Iphumelele ekutholeni ukuhoxiswa kwamasosha angaphandle ngale kwemingcele ebiqashelwa ngaphambili nokuhlonipha ubukhosi bukaMatamba. Ekupheleni kwezingxoxo, iviceroy uphakamise ukuthi indawo yamahhala yendlovukazi ibekwe ngaphansi kokuvikelwa kwenkosi yasePortugal, okusho ukuthi empeleni kwakukhokhwa intela eyayihlanganisa ukulethwa kuka-12 kuye ku-13 izigqila ngonyaka ekuphathweni kwamakoloni! Isiphakamiso sokuthi u-Anna Zingha wenqabe ngokuqinile. Isivumelwano esisayiniwe, u-Anna Zingha walinqoba icala lakhe futhi wakwazi ukubusa engxenyeni yokugcina yezwe kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo-000 eneminyaka engama-1664. Ngaphandle kokushiya indlalifa esihlalweni sobukhosi, wayengumbusi wokugcina ukubusa e-Angola. Ngenkathi i-Angola iba yisizwe esizimele ngo-82, umgwaqo waseLuanda waqanjwa ngawo.
UZingha, iNdlovukazi yase-Angola: Umlando wase-Afrika, Olandelwa Ucwaningo Nokuqashelwa Kobudlova ...
Thenga i- € 18,13
Kugcine ukubuyekezwa ngoJanuwari 22, 2021 1:02 am
Ukuntula ukwazi nokukhohlisa kobukhona
I-Planet Yoga - Imibhalo (2015)
NginguMartin Luther King - Idokhumentari (2018)
I-Esoteric Psychology - u-Alice Bailey (PDF)